Soo dejinta birta Shiinaha ayaa meel sare gaadhay sannadihii la soo dhaafay, taas oo muujinaysa koror sannad-sannadeed ah oo ku dhowaad 160%
Waqtiga boostada: 03-08-2021
Bishii la soo dhaafay, soo dejinta birta Shiinaha ayaa gaartay rikoor aad u sarreeya sannadihii la soo dhaafay, taasoo muujineysa koror sanad-sannadeed ah oo ku dhowaad 160%. Marka loo eego xogta uu sii daayay Maamulka Guud ee Kastamyada, bishii Sebtember 2020, dalkaygu wuxuu dhoofiyey 3.828 milyan oo tan oo bir ah, koror ah 4 ...Akhri wax dheeraad ah »
Mashiinka Midowga Yurub: Waxaa la filayaa in wax soo saarka warshadaha EU-da ee birta ay hoos u dhici doonto 12.8% sannad-sannadka 2020
Waqtiga dhejinta: 08-25-2020
Midawga Yurub iyo Birta (Eurofer, oo loo yaqaan European Union and steel Union) bishii Ogosto 5 ee la sii daayay saadaasha suuqa ee ah in waxsoosaarka dhammaan warshadaha birta cunaya ee Midowga Yurub ay hoos u dhici doonaan 12.8% sannad-sannadeedka 2020-ka oo ay sare u kici doonaan by 8.9% in 2021. Sikastaba, Xiriirka Birta Yurub ...Akhri wax dheeraad ah »
Badeecadaha laga soo dhoofiyo Vietnam ayaa hoos u dhacay 5.4% qeybtii hore ee sanadka
Waqtiga dhejinta: 07-16-2020
Lixdii bilood ee ugu horreysay sanadkan, Vietnam waxay soo dhoofisay wadar ahaan 6.8 milyan tan oo ah waxsoosaar bir ah, oo leh qiima wadar soo dejin ah oo ka badan 4 bilyan oo doollarka Mareykanka ah, taas oo ahayd hoos u dhac 5.4% iyo 16.3% marka la barbar dhigo isla muddadaas la soo dhaafay sanadka. Sida laga soo xigtay Vietnam Iron iyo Steel Associati ...Akhri wax dheeraad ah »
Hormarinta farsamada ee ka hortagga dib u noqoshada miiska diwaangelinta hawada lagu qaboojiyey si loo kordhiyo dhalidda biraha soo baxaya
Waqtiga boostada: 07-14-2020
Waqtiga oo dhan, Xinxing Steel wuxuu muhiimad weyn siinayaa tayada biraha wuxuuna tixgeliyaa tayada mudnaanta koowaad. Halkan, marka miiska xawaaraha sare ee hawada-qaboojiye ee waaxda rogid ee Xinxing Iron iyo Steel Plant ee Xinjiang uu shaqeynayo, haddii geeddi-socodka soo socda uu la kulmo wax-soo-saare ...Akhri wax dheeraad ah »
Saamaynta heerkulka deminta ee microstructure iyo sifooyinka birta labada waji leh
Waqtiga dhejinta: 07-03-2020
Sida dhiiga warshadaha, saliidu waxay kujirtaa boos muhiim ah istiraatiijiyadda tamarta. Furaha kordhinta wax soo saarka saliida dalkayga waa hagaajinta tikniyoolajiyadda qodista shidaalka. Tiknoolajiyadda tubooyinka la ballaarin karo ayaa muhiim u ah injineernimada cusub ee saliidda iyo gaaska tiknoolajiyad cusub oo la soo saaray lana soo saaray dhammaadka ...Akhri wax dheeraad ah »
Midowga Yurub wuxuu ku sameeyaa baaritaanka ka-hortagga qashin-qubka birta Turkiga, kuwa aan isku-darka ahayn ama waxyaabaha kale ee birta fidsan ee kulul
Waqtiga boostada: 06-11-2020
Bishii Maajo 14, 2020, Komishanka Yurub wuxuu soo saaray ogeysiis sheegaya Eurofer, oo ka wakiil ah soo saarayaasha alaabada birta fidsan ee birta ah, kuwa aan ahayn ama kuwa kale, ayaa lagu tiriyaa in ka badan 25% ee wadarta wax soo saarka alaabooyinka la midka ah. ee Midowga Yurub, oo la soo jeediyay Maarso 31, 2020 Yurub ...Akhri wax dheeraad ah »
Isbedelka Warshadaha Birta iyo Birta ee Shandong "U gudub dhaqanka oo hel tayo"
Cadaadiska hoos u dhaca ee dhaqaalaha qaranka, isbeddelka iyo casriyeynta warshadaha birta kaliya maahan baahida loo qabo horumarinta shirkadda lafteeda, laakiin sidoo kale baahida loo qabo in la xalliyo awoodda wax soo saarka biraha ee xad-dhaafka ah iyo baabi'inta wax soo saarka iyo geedi socodka gadaal u dhaca. Sida weyn ee ...Akhri wax dheeraad ah »
Sannad-guuradii 60-aad ee shirkadda Baosteel Group ee soo saarista biraha waxay uruurisay 240 milyan oo tan oo bir ah
Wariyuhu wuxuu ka bartay Baosteel Group 2-dii Juun tan iyo markii Baosteel Group lambarkiisa furitaanka birta 1aad ee la furay la duubay 1960, Baosteel Group waxay soo saartay 240 milyan oo tan oo bir ah 60 sano. Wax soo saarka birta ee kooxda Baosteel Group wuxuu soo maray sadexda marxaladood ee furitaanka wadnaha oo furan ...Akhri wax dheeraad ah »
Baosteel-ka Shiinaha ayaa hoos u dhigay qiimaha Apr
Waqtiga dhejinta: 04-16-2020
Sida laga soo xigtay ku dhawaaqista Shiinaha ee Baosteel, oo ka mid ah shirkadaha waaweyn ee biraha adduunka, Baosteel wuxuu go'aansaday inuu yareeyo qiimaha gudaha bishii Abriil. Intaas ka hor, suuqa ayaa kalsooni weyn ku qabay qiimaha cusub ee Abriil ee Baosteel, badanaa maxaa yeelay waxaa jiray dhowr siyaasadood oo dhiirrigeliyay ...Akhri wax dheeraad ah »
Qiimaha nikkel ee LME wuxuu koraa $ 700 / tan Mar 13
Sida laga soo xigtay wararka suuqa, qiimaha nikkel ee London Metal Exchange (LME) 13-kii Maarso, wuxuu ku kordhay US $ 700 / tan, wuxuu joojiyay isbeddelka sii yaraanaya. Waxaa saameeyay welwelka adduunka ee cudurka 'COVID-19', faafintii qiimaha 'nickel' usbuucii la soo dhaafay waxaa lagu muujiyay rajo xumo, xitaa wuxuu hoos ugu dhacay US $ ...Akhri wax dheeraad ah »
Telefoon: +86 15961849200
Telefoon: +86 18921370797
Soo dejinta birta Shiinaha ayaa ku dhacday hig cusub ...
Bishii la soo dhaafay, soo dejinta birta Shiinaha ayaa gaartay rikoor aad u sarreeya sannadihii la soo dhaafay, taasoo muujineysa koror sanad-sannadeed ah oo ku dhowaad 160%. Sida laga soo xigtay xog ay sii daayeen Maamulka Guud ee Kastamyada, S ...